ကပ်ပါးကောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ကပ်ပါးကောင်
Posted by ကျော်စွာခေါင် on Feb 24, 2014 in Arts & Humanities, Creative Writing | 40 comments
Silicon make up ဆိုတာ နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်နယ်ပယ်မှာ သုံးနေခဲ့တာ ကြာပါပြီ..။
ပန်းချီပညာနဲ့ မိတ်ကပ် ပညာက နီးစပ်နေတော့ အရင်ကတည်းက စိတ်ဝင်စားနေမိခဲ့ပါတယ်..။
နောက်ပြီး မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကမှာလဲ သုံးစွဲတာ မတွေ့ ရသလောက်ပါဘဲ…။
ဈေးကြီးတာ။ အလှမ်းဝေးနေတာနဲ့နည်းပညာလိုအပ်နေလို့ ဘဲလို့ ထင်မိပါတယ်…။
စီလီကွန် မိတ်ကပ်က တစ်ကယ်ကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုရင် ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်ရင်းအတုလား အစစ်လား ခွဲမရနိုင်တာကို တွေ့ ရပါတယ်..။
ဒီ ပညာရပ်ကို စိတ်ဝင်စားတော့ လက်လှမ်းမှီသလောက်လေ့လာရင်း စမ်းသပ်ကြည့်ပါတယ်…
မိုက်ကယ်လ် ဂျက်ဆင် ပုံတွေ ကြည့်နေရာက ဂျက်ဆင်ရဲ့ နှာတံလို သေးတဲ့
အိမ်သူသက်ထား မဒမ်ခေါင်ကို စမ်းကြည့်ထားတာပါ…
ဒါက…စီလီကွန် မိတ်ကပ် အစစ်မဟုတ်သေးပါဘူး…
မိတ်ကပ်ကို မူလထက် ဖြူအောင်လိမ်း…
ဆံပင်တွေကို ကော်နဲ့ လိမ်ကောက်ကောက်တွေ ဖြစ်အောင်လုပ်……မျက်လုံးကို
ကွယ်ဘို့မျက်မှန်သုံး….ပုံမှန်ရယ်တာကို ပြင်ပြီး အမျိုးမျိုးရယ်ခိုင်း….
နည်းနည်း ကျိုးစားပြီး ထပ်ရယ်ပေးပါဦး….မဒမ်….။
အနီးစပ်ဆုံး အကျီနဲ့ဦးထုပ်ကို သေချာရွေး…….စတိုင်း အမျိုးမျိုးပြောင်း…
နီးစပ်သလောက် ဖြစ်လာပြီ …ဦးထုပ် မတူဘူး…ပြောင်း…နောက်ပြီး မျက်နှာက
နည်းနည်းလေးပြည့်နေတယ်…မိုက်ကယ်က မေးစေ့ကြီးပြီး ပါးချောင်ကျတယ်…
ကဲ…လာ… မျက်နှာချောင်အောင် အညိုရောင်နဲ့ ပါးပြင်ကို လှည့်စားမယ်…
ဒါ…စီလီကွန် မပါသလောက်ဖြစ်ပြီး မိတ်ကပ်ကိုဘဲ ကစားထားတာပါ…
သူ့ မျက်နှာကို ပံ့ပိုးမယ့် အကျီ ဆံပင် ဦးထုပ် အသုံးအဆောင် မီးအလင်းအမှောင်နဲ့ 
ကျနော့်ရဲ့ စီလီကွန်မိတ်ကပ်က အရမ်းအကောင်းကြီး မဟုတ်သေးပါဘူး…။
စီလီကွန်မိတ်ကပ်ကို တစ်ကယ်ကျွမ်းကျင်ပြီး လှည့်စားလာရင် ကြည့်နေသူတွေ
အတုကို အစစ်ထင်ပြီး အမြင်မှားတော့တာပါဘဲ…။
အတုဆိုတာကလည်း အစစ်ကို အခြေခံရတာပါ…။
စီလီကွန် မိတ်ကပ်ကောင်းရင် ရုပ်ရှင်မိတ်ကပ်လောက တိုးတက်နိုင်ပေမယ့်….
စီလီကွန် သင်္ကန်းတွေ အားကောင်းပြီး သိပ်ပီပြင်နေရင်…..
သာသနာ အတွက်တော့ မကောင်းဘူး….။
မဒမ်ခေါင်ဂ မွန်ဆိုဒေါ့စ်… သမော်ဒီးဂိုစ် နန္ဒာလှိုင်လို ခြယ်သပေးလိုက်လျင်… ဂလုစ် နေမှာဗဲစ်.. လုပ်စ်ပါဗျာစ် တဗုံလောက်စ်… ကွိကွိ
သမော်ဒီးစ်ကို နန္ဒာလှိုင်နဲ့တူအောင် ပြင်းပေးပြီး…
ဦးကြောင်ကို ဦးခင်ရွှေဂျီးနဲ့ တူအောင် ပြင်ပေးလိုက်လို့ ဂတော့…အံမာလေး ( မိုက်) လိုက်မယ့် ဖြစ်ခြင်း…။
မိတ်ကပ်အဖက်ထ် မိုက်တာကို ပြောတာ… ဟိ။
မဒမ်ခေါင်က မြန်မာမလေးပါဂျာ…။း)
ဟိုးနောက်ဆုံး က ကပ်ပါးကောင် အကြောင်းတော့ ပြောတော့ဘူးနော့။
အဲဒီ မျက်နှာကို ချောင်ကျသွားစေတယ်ထင်ရတဲ့ မိတ်ကပ်လိမ်းနည်းတော့ သဘောကျတယ်။
နို့မို့ မျက်နှာကျအောင် နံပတ် ဖိုး တွေ ရှုနေရမစိုးလို့။
အဖေရော အမေရောချောတယ်ဆိုတော့ ကလေးတွေ ချောမှာ သေချာသလောက်ပဲ။
မိုက်ကယ် ဂျက်ဆင် ကို စ ကြည့်ဖူးတော့ ၆ တန်းးး
Dangerous ကို အပိုင် မဝယ်နိုင်လို့ သူငယ်ချင်းဆီကနေ အခွေတွေ ကူးပြီး တိတ်တွေ ပါးသွားတဲ့ထိ အခေါက်ခေါက်အခါခါကြည့်ဖူးတယ်။
ဘဝမှာ ဇာတ်ကြည့်ဖူးတာ ၁၀ တန်းအောင်ပြီးတော့။
သူ့ စတိတ်ရှိုး အပိုင်းက သူ က တာ မိုက်ကယ် ဂျက်ဆင် အတိုင်းပဲ ဆိုလို့ အဲဒီအပိုင်းကျမှ သွားကြည့်တာ။
ကန့်ဘလူမှာ သားအမိ ၂ ယောက် စောင်လေးတွေ ခေါင်းမှာ ခြုံပြီးးးးး ရုပ်ဖျက်သွားတာ။
ငယ်ငယ်ကတည်းက ဂျက်ဆင်ကို ကြားဘူးပေမယ့် ခွေကြည့်ရတာ နောက်ကျတယ်…
ရန်ကုန်က မင်္ဂလာဒုံဝါယာလက်မှာ ဂျက်ဆင်အကနဲ့ဘရိတ်ရောပြီး ရှိုးမှာ က လိုက်တာ တားမြစ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းချိုးဖျက်တယ်ဆို
ပြီး သဘင်ကောင်စီက လာဖမ်းတုန်းက ပြေးပုန်းနေရတာ တွေးမိသွားတယ်..အဲ့တုန်းက ပိတ်တယ်လေ…
နှစ်းပါးကချိန်မှာ တစ်ခေါက် အမိပြန်လာဖမ်းတာ …ဒဏ်ငွေဆောင်လိုက်ရတယ်..“ ဟီးးးး
ကေဇီနဲ့တူတယ်..။
ဟီ ဟိ မိုက်ခဲကြက်ဆင် စတိုင်က အမိုက်သားပဲ…
အော်ရီဂျင်နယ်လည်း ဖတ်လို့ကောင်း ၊ ဂလိုလေးလည်း တမျိုးကောင်း…
စကားအတင်းစပ်… ကျောက်စ်ကို ဖြူအောင်လုပ်ပေးမည့် မိတ်ကပ်လေးများ ညွှန်းပါ…
ဆန်တွေကတော့ များများဖွပ်ရင် ဖြူလာတယ်လို့ကြားတာဘဲ…
မဒမ်ကျောက်စ်ကို ထုထောင်း ပြီးဖွပ်တဲ့နည်းတွေ ပို့ ပေးလိုက်မယ်လေ…။
စကားမစပ် ..ဒုတိယပုံက မမချွိ နဲ့တစ်ပုံစံထဲပဲ..ဟိဟိ
သူများတွေ ကြား ရင်
သများ ကို အထင်လွဲကုန်ပါ့မယ်ဟယ်!!
ကိုမိုက် လေယူလေသိမ်းကြီးက သားသားကို ကြိမ်းဝါးနေသလိုဘဲ…သားသား ကြောက်ကြောက်..။ ဟဲ…စ တာ။
ကိုမိုက် ပြောပုံအရဆို မမချွှိ လဲ…တော်တော်လှမယ်…( ကဲ…မုန့် ကျွေးပါ ကေကေ )
မဒမ်ခေါင် က မကြီးစိုးနဲ့ တူတယ်ဆို …..
မဒမ်နဲ့ တူတယ် ဆိုတဲ့ မမချွိက ဒါဒါ နဲ့ တူမှာပဲ။
ဝ တာ တူတာဟုတ်ဘူးနော်။
မုန့်မကဖူးလေ ကြိုက်ရာကို ထမင်းဆိုင်မှာ စားသွားလေ။
ဒါသည်လဲ ပညာရပ် တစ်ခုပေ…
ကောင်းသည့်ဘက်တွင် အသုံးချတော့ အကျိုးဖြစ်သည်။
ဖားသဂျိုး ၏ ဝိုးတိုးဝါးတား ဒဿနများ….
စိုးမြတ်သူဇာပုံကို.. မိုက်ကယ့်ပုံဖြစ်အောင်.. ပြင်နိုင်တာ.. နည်းနည်းနောနော… စွမ်းရည်တော့မဟုတ်..
ခု သူကြီးပြောလို့ လေ…ရွာက အေးဘုံက သူ့ လို စိုးမြတ်သူဇာ မျက်နှာထားရှိသူက မီးဖိုချောင် ဝင်ရမယ့် ရုပ်ရည်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး
အလှတွေ ပြင်မယ် တကဲကဲ လုပ်နေပြီဗျ…။
တော်လိုက်တဲ့ဆြာခေါင်နှယ်။ ဆြာခေါင် မြန်မာနိုင်ငံအနုပညာလောကထဲမရှိတာ အတော်နစ်နာတယ်။ ဆြာခေါင်သာ မြန်မာပြည်ထဲရှိပြီး အနုပညာလောကထဲရှိနေမယ်ဆိုရင် အနုပညာလောက ရဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖြစ်မှာပဲ။ ပြုပြင်ရေးတွေလုပ် မုန်းသူထောက်ခံသူတွေကြားထဲမယ် အနုပညာလောကတော့ အတော်အတန်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာနိုင်ဒါမို့ နှမျောမိပါတယ်။
မောင်နှမချင်း သိပ်မြှောက်နေ…သူများ ပြောလိမ့်မယ်..။
ကျနော်က ဒီလောက်ကြီဒ မဟုတ်သေးပါဘူး…။
ဒါပေမယ့် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကတော့ တနေ့နေ့ပြန်ကူညီဘို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်..။
ကျနော်တို့မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်နယ်ကတော့ ရုပ်ဖျက်ပြီဆိုရင် သွားခေါနဲ့ကျောဘု ဘဲ….ကြာလှပြီ..။
မကြီးစန်းတို့ က အလှလိုင်းတော့ ကောင်းတယ်.. Effect ကျတော့ မလုပ်ကြဘူးလေ..
နောက် စပါယ်ရှယ် မိတ်ကပ်ကိုလဲ ပိုက်ဆံသိပ်ပေးချင်ပုံမရပါဘူး…
အကယ်ဒမီ ၄….၅ ခုပိုင်ရှင်တွေကအစ ဒီဇာတ်ရုပ်အတွက် ငါ ဒါတွေ လိုအပ်တယ်…ငွေစိုက်ထုတ်ပြီး ပီပြင်အောင် လုပ်ပြမယ်လို့ 
ပြောလိုက်ရင်တော့ အနုပညာနဲ့ ပြည်သူကို ပေးဆပ်တာကို ပါးစပ်ကမချဘူး..။
ပြီးတော့လဲ…. ခါးကုန်း သွားခေါနဲ့ကျောဘုပါဘဲ…။
အဲဒါပြောတာပေါ့ ဆြာခေါင်ရယ်။ တကယ့်ပညာရှင်တွေအများကြီးလိုအပ်သလို ပြုပြင်ပြောင်း လဲ နိုင်မယ့်သူ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု့မှာ ဦးဆောင်နိုင်မဲ့သူတကယ်ကိုလိုအပ်နေတယ်လို့မြင်မိပါတယ်။ သူတို့က ဘုန်းကြီးတစေဖြစ်နေလေတော့ ဦးဆောင်မဲ့သူကလဲ တကယ့်ကို ပညာပြည့်ဝပြီး သူတို့ မလှန်နိုင် လောက်အောင်တော်နေမှာသာ ပြုပြင်ရေးကိုလက်ခံလာလိမ့်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်။
Amazing Arts!!!!!!!!!!!! Bravo ဗျာ ဖွဘုတ်မှာ အောက်ဆုံးကပုံကိုပဲ ကွက်ယူလိုက်ရင် မိုက်ခဲကြက်ဆင် အစစ် တရဲခြောက်တယ်ဆိုပြီး Comment ဗလပွ Share ဗလပွ နဲ့ ဖြစ်နေမှာ မြင်ယောင်သေး အဟေးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ကျနော်က FB သိပ်မသုံးဘူး…
ပိုင်လေး ယူသုံးချင်ရင်တော့ ယူသုံးပါ..ခွင့်ပြုပါတယ်
မိုက်မှ မိုက် ဗျ
ဒီလောက်ပညာတွေ အများကြီးကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ ဘယ်လိုများ သင်ယူခဲ့တုန်း ကိုခေါင်။ ပညာတွေအတွက် လေးစားရတာထက် အံ့သြရတာက ပိုနေပြီ။
ကျနော်လဲ ရှင်းပြလို့မတတ်တော့ဘူး မျှစ်ကြော်ရေ..။
သူများကို ကူညီဖြည့်ဆီးပေးရင်း ကိုယ့်အတွက်ပြည့်လာတယ်လို့ ဘဲ ကျနော်က ယုံကြည်မိတော့တယ်….။
မျှစ်ကြော်ကိုလဲ …စာတွေဖတ်ပြီး ကျနော်က လေးစားပြီးသားပါနော်…။
စမ်းစရာ ရှာလို့ ဒက်ဒီခေါင်ရာ …။
ဘယ်လို ပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး. . .
ကျုပ်မှာ လက်ညိုးထိုး ရာ ဖြစ်စေ အာဏာများရှိခဲ့ရင်
မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ဗီဒီယို လောကကလူတွေကို ခင်ဗျားဆီ
စရိတ်စက ဘာညာ တွေကလျောက်ပြောနေတာ။
ဓာတ်ပုံနဲ့ အဆင့်ဆင့်မပြပဲ မဒမ်ခေါင်ကို မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ပုံဖြစ်အောင် ပြင်နိုင်တယ်ပြောရင် ကြွားတယ်လို့ ထင်မှာ။
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကမှာတော့ မိတ်ကပ်ကို သဘာဝကျဖို့ထက် လှဖို့ကို ဦးစားပေးနေလို့ မတိုးတက်တာလို့ ပြောချင်တယ်။
မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်လောက..မိတ်ကပ်လောကကို တိုးတက်စေချင်တာတော့ စေတနာအမှန်ပါဘဲ..
မတန်မရာ ကြီးကျယ်ပြီး ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး…
silicon make up effect ကျတော့ ပန်းချီပန်းပု အခြေခံလိုတယ် မမ.။
သေချာမွေးယူရမှာ…ပညာရှင်ကို..မိပ်ကပ်လိမ်းတတ်ရုံနဲ့ တော့ မပြည့်စုံဘူးလေ..။
ဖျားဖျား ဆြာခေါင်ရဲ့အတတ်ပညာက အမျိုးစုံလှတာလက်ဖျားခါပါရဲ့
ဒါပေမယ့် ဆြာခေါင့်မဒမ်ဖြစ်ရတာမစားသာ။ခမျာ မိုက်ကယ်ဒမ်ခေါင်တောင်ဖြစ်သွားရတယ်။
ဆြာခေါင်လို့မိတ်ကပ်ဖန်တီးရှင်သာပြန်လာရင် မြန်တျန့်ရုပ်ရှင်လောကကြီး တိုးတက်လာမှာအသေချာ။
” မိုက်ကယ်ဒမ်ခေါင်” တဲ့လား မနန်း…နာမည်ပေးတာကတော့ ရှယ်ဘဲ..။
ကျနော်လည်း ဒီပညာကို ထပ်လေ့လာမှာပါ…
ပြီးရင် ကျနော် ပြန်ပြီး မျှဝေပေးမှာပါ..။
အုတ်တစ်ချပ် မဟုတ်ရင်တောင် သဲတစ်ပွင့် အနေနဲ့ ပေါ့..။
ပိုစ်တွေ တစ်ခုဖတ် တစ်ခုဆိုသလိုပါဘဲ
တအံ့ တသြ နဲ့ တွေးစရာ တပုံတပင်
လိုက်​မမီ.. ဘယ်​လိုနည်းနဲ့မှ လိုက်​မမီ .. ​ဖေ​ခေါင်​တို့က မလုပ်​ရင်​အရှင်း.. လုပ်​ရင်​လည်း expert..
အန်တီမမ လက်တို့လို့ ခေါင့်လက်ရာ မိတ်ကပ်ကို ပြေးလာကြည့်ရတယ်။
ဆီလီကွန်ကို ရင်သားကင်ဆာဖြတ်ထုတ်ရတဲ့ မိန်းမတွေ အလှမပျက်စေရေး သုံးကြတယ်လို့ပဲ ကြားဖူးတာ ၊ခုမှပဲ မိတ်ကပ်သုံးလို့ရမှန်း တအံ့တသြသိရတော့တယ်။
စီလီကွန် သင်္ကန်းတွေအကြောင်း မကောင်းတာပြောရင် သစ်ခေါက်ဆိုးသင်္ကန်းတေါက မနာကြဖို့လည်း လိုတယ်ခေါင်ရေ။
ကျမတို့ နောက်တခါတွေ့ဆုံပွဲကျရင် ဆြာခေါင့်ကို မိတ်ကပ်ခေါ်ပြင်မှပဲ။မျက်စိလေးနည်းနည်းမှေးတာ
ရုပ်လေးနည်းနည်းဆိုးတာလောက်တော့ သက်မွန်မြင့်လောက်လှအောင် ပြင်ပေးမယ်မလားဟင်။
ဦးခေါင်က စွယ်စုံရပဲ… တခါကလေယာဉ်ပေါ်မယ်..ယိုးဒယားမင်းသမီးလားမော်ဒယ်လားမသိ.. မြန်မာမှာ ဓာတ်ပုံလာရိုက်တာထင်ပါတယ်.. သူ့ခရူအဖွဲ့တွေလည်းပါတယ်.. လေယာဉ်ပေါ်တက်စ သူ့မျက်နှာက ပြားပြားဝိုင်းဝိုင်း ကဗျာဘွဲ့မှူးတို့ထက်တောင် ပြားဝိုင်းသေး…. ဘာမှဆွဲဆောင်မှုမရှိ… လေယာဉ်စီးချိန် ၄၅မိနစ်လောက်အတွင်းမှာ သူ့မိတ်ကပ်ဗူး ဘုစုခရုပေါင်းများစွာနဲ့ သူကိုယ်တိုင်ပဲပြင်လိုက်တာ.. မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်လည်းဆင်းခါနီးရော.. သူ့မျက်နှာလေးက ဖူးဖောင်းလှပနေရော…. ပထမ ငါးမူးစေ့မျက်နှာနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူး.. အဲဒီပညာမျိုးရချင်သား :))
အာ့ပဲပြောနိုင်တော့တယ် စာရေးကောင်း ပန်းချီဆွဲကောင်း ခုတော့ နောက်ထပ်တစ်မျိုး ထပ်တိုးပေါ့ …
အော် မလိုင်ချက်တာလည်း တော်သေးတယ်
နောက် တစ် ခါ ရွာ ထဲ မှာ မင်္ဂ လာ ဆောင် သူ ရှိ ရင် ခေါင်ခေါင် နဲ့ အ လှ ပြင် ခိုင်း မယ်။
အတည် ပြော တော့ မယ်
ကျ နော် တို့ ဆီ က လူ တွေ က ရှိ တာ နဲ့ လုပ် ဘို့ စိတ် မကူးဘဲ ငါ တို့  မှာ လက် နက် မ စုံ ဘူး လောက် ဘဲ နဲ့
ထိုင် နေ ကြ တာ ဗျာ
မအိ၊ မွန်မွန်၊ မမမာ၊ မလှိုင်း၊ နိုဗီ၊ ရွှေမိုးတိမ် နှင့် ကိုပေါက် ခင်ဗျား
လာရောက်ဖတ်ရှုဝေဘန် အားပေးတာ သိပေမယ့်..
ကွန်မန့် တောင် ရဲရဲ မရေးရဲပါ..
အပေါ်မှာ ကျေးဇူးပါလို့ပြောတဲ့ ကျနော့်ရဲ့ ကွန်မန့် တောင် မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီး အနီလိုက်လုပ်နေတော့
ကျနော့်အပေါ် တော်တော် မုဒိတာပွားနေပုံရတယ်..
မန်းဂေဇက် ဆိုက်ဟာ တော်တော် ပွင့်လင်းတဲ့နေရာဖြစ်တာတောင် အမည်တပ် မဝေဘန်ဘဲ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လို့ ရေးတာလေးတောင် ဒီလူ မခံစားနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်..
ဘာဘဲ ပြောပြောလေ…ကြိုက်တာ မကြိုက်တာကို နာမည်တပ် ဝေဘန်ရဲပြီး…..မန်းဂေဇက်မှာ
စာပေလူတောတိုးပါစေ လို့ ဘဲ ဆုတောင်းပေးပါတယ်…း)
” အပေါ်မှာ ကျေးဇူးပါလို့ပြောတဲ့ ကျနော့်ရဲ့ ကွန်မန့် တောင်
ကျနော့်အပေါ် တော်တော် မုဒိတာပွားနေပုံရတယ်.. ”
ဟဲ ဟဲ ။ ကို ခေါင် ရေ ။ အဲဒီ အနီ တွေတော့ လိုက်ခံစားမနေနှင့်ဗျ ။
ပုံစံ က တစ်ဦး တစ်ယောက် ကိုမှ လိုက်နီနေတာတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ ။
MG ဆိုဒ် ကြီး တစ်ခုလုံးက ၊ Post တိုင်းလိုလိုမှာ လိုက်လုပ်နေတာဗျ ။
သူ့ Feeling နှင့် သူပေါ့ဗျာ ။ Neglect လုပ်လိုက်ပါဗျ ။
နီတာ ဝမ်းတောင်သာသေးတယ်.. သူများ မနာလိုခံရတာလောက်… ပျော်ဖို့ကောင်းတာမရှိဘူးတဲ့.. ဟိဟိ..